Siza kuzisa njani utshintsho olukhulu xa i-99% ingaphili? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo UKUBHALA	by UMartin Vrijland	15 Julayi 2019	• 32 Comments
Kalokunje siye safikelela kwisigqibo sokuba abaninzi abasondezayo basuke bangaphili (bona eli nqaku), Ndikucela ukuba uphinde ucinge ngale ngxelo. Andiyithethi 'ngendlela yokuthetha' okanye 'ngeengqungquthela', akukho nto ndiyithetha ngokungekho nto. "UHamba uphindweNgaba isazi esaziwayo esivela eBhayibhileni. Akukho nto, ngenxa yokuba le polanethi yomhlaba kwakufuneka izalise i-bio-avatars engapheliyo kunye necawa yenze igalelo elikhulu kulo. Kwaye xa umntwana ezalwa okanye ephefumlelweyo, kukho ubhaptizo abazali banikezela ukulawula kwe-avatar ebandleni ngokubhaptizwa kwamanzi entloko (jonga ividiyo ezantsi). Le yinto yokuqala yokutshekisha ngabagcini besikripthi ukuba babone ukuba umntwana ozalwayo usasazela.
Namhlanje, iCawa yamaKatolika isisona sikhulu esikhulu sehlabathi emhlabeni; kunye negazi elihloniphekileyo elinokulinda ngokubhaliweyo le ngqangi: icawa ngokulawulwa kweengqondo zayo kunye ne-aristocracy njengombutho olawulayo kwezopolitiko kunye nezoshishino ezifihliweyo emva kokubonakala kwentando yesininzi, iibhanki kunye namazwe amaninzi, apho i-pawn bloodline yayo ilawulwa khona. Iskripthi esikhulu sihlala sisichasene nokuphikisana nokugqithisa ukugcina ukuhamba kwangoku (nje ngeefowuni kunye kunye neefayile ezivelisa ngoku ngqo). Ama-avatars angabantu abangapheliyo (okulula ukwenza inkqubo) abazibekayo kwinkonzo yale bhloko yamandla, kulula ukuba ugcine i-pesenti encinci 'yemiphefumlo'.
In eli nqaku Ndacacisa indlela ubuchopho bomntu obuhlelwe ngayo ukususela kumntwana. Nceda ufunde iincwadana zombini ngokucophelela ngaphambi kokuba uqhubeke ufunda apha. Kubalulekile ukuba uyayiqonda eli hlabathi kunye nale ndawo yonke into: ukufaniswa.
Kwakhona kubalulekile ukubona ukuba (ngokuvelisa) ukuzithobela i-bio-avatars inokwakheka kwengqiqo yokuba siza kuba nexesha elinoku. I-bio-ingqondo yomzimba womntu (i-avatar yomntu) ihlakaniphile ngokwaneleyo ukuba ifunde, ilandele iikholeji zoqeqesho, yenza umsebenzi, ujabulele umculo, udaniso, ubukele iifilimu, uye kwiholidi kwaye ujabulele. Nangona kunjalo, kungenxa yengqondo ye-AI yoluntu (inqanaba elengqiqo). Inqanaba elifanayo ngoku liqala ukufikelela kwihlabathi letheknoloji, ngoko sinokukuqonda kakuhle.
Izolo umyalezo weza kwiwebhusayithi Zerohedge.com apho kuye kwaxelwa ukuba i-Facebook iye yavelisa i-AI engasebenza kwi-PC elula esikhundleni sekhompyutheni enkulu ye-Google esuka kwi-Google Alphabet ekwazi ukufunda umdlalo onzima kakhulu. Hamba ngexesha kwaye umbethe umdlali obalaseleyo kwihlabathi. I-Facebook yavelisa inkqubo ye-AI (ebizwa ngokuba ngu-Pluribus) eyakwazi ukubetha abadlali be-poker 6 ngamaxesha kunye nesikhathi kwakhona. Ngako-ke i-AI ibetha abadlali abaninzi ngokusebenzisa iziphumo eziyinkqantosi. Umdlalo ohambayo uhamba lula kakhulu kwi-AI, nangona kukho ukuba kukho inhlanganisela yebhodi enokubakho kunokuba kukho i-athomu kwihlabathi elibonakalayo (kuba yonke ingcaciso iyabonakala ikhona ukuba ibone). Oku kwenza kube lula kwi-AI ukuqeqesha. Oku kwahlukileyo kwi-poker, kuba ujongene ne-bluff factor yeqela abadlali. I-Facebook yoko yazama ukuqalisa inqaku elilandelayo izolo:
"Kukhuselekile ukuba sisezingeni eliphezulu lomntu kwaye akuyi kutshintsha."
Siyi-2019 kwaye uphuhliso lwethekhnoloji luhamba ngokucacileyo. Sifudukela kwilizwe eliqhutywa yi-AI, kodwa abazi ukuba bayakha ikopi kwikhophi. Sivele siphila kwi-AI eyenziwa yiyona nto kwaye umakhi walo mlinganiso uzama ukusiphulaphulela 'ubomi obungunaphakade' ngokusinika isithembiso sobomi obungunaphakade ngokusebenzisa i-transhumanism kwaye ngoku kusinika (ubuninzi) ubuninzi be-AI ukukhwela. Ubomi obungunaphakade obungunaphakade njengoko sinikelwa ngeenkolelo kwaye 'umesiya' ngokuqinisekileyo uya kuvela 'efwini'. "Umesiya" oya kusihlambala (inkohliso) ukuze siphumelele ngakumbi kwi-AI kwaye ngoko ke sisebenzise amandla okudala omdlali wokuqala (kunye naye unomnxeba womoya ongenawuncingo) kwintsimi yesantum (njengentsholongwane).
Nangona kunjalo, ngenxa yolu phuhliso kwintsimi ye-AI, kuya kuba ngcono ukuqonda ukuba i-avatar yesimo somntu i-autonomous bio-avatar ene-bio-brain esebenza ngokuhlakanipha. Inzululwazi isele ikwazi ukuphrinta izitho ezivela kwiinkcukacha zeseli ze-stem kwaye zibizwa ngoko kukhula i organoids apho imizekelo ye-3D yeengqondo zakhiwa. Iingqungquthela zeBrain nazo zanda ngokugqithisileyo kwaye abantu baqala ukuqonda ukusebenza kwengqondo yomntu. Kubonakala kubomelele ukuba ubuchopho bethu buziphatha njenge-bio-processor ehlakaniphile. Ngethuba elincinane sinokuphrinta ingqondo kwaye siqinisekise ukuba sisayizi elungileyo ukuqhuba inkqubo ye-AI efunwayo. Emva koko sinokuphrinta ii-avatars ze-bio-robot. Ngokuqinisekileyo oku kuphuhliswa kwezobuchwepheshe konke kwenzeka phantsi kokusombulula iingxaki ze-Alzheimer kunye nomqondo wokuguga komqondo okanye ukuyeka ukuguga, kodwa unokucinga ukuba kukho iinjongo eziphakamileyo. Kubalulekile ukuqonda indlela ubuchopho busebenza ngayo ukuba ufuna ukuxhoma ingqondo kwifu okanye wenze izibuyekezo kunye noshintsho. Oku kusebenza kuyo yonke i-biosystem system. I-robot-bio-i-bio ishintshi inkqubo yayo ukuze ibeke isiseko 'sokwenziwa ngcono' kunye neikopi ezingapheliyo.
Isiphakamiso sam kukuba isibalo somntu ngokwenene sele senza i-bio-robot (autograum) i-autotomous (avatar) ngaphakathi kwesi simelo kwaye ezinye i-avatars zilawulwa ngaphandle, kodwa zininzi "zi-avatars ezingapheliyo". Oku kuthetha ukuba banikwa isiseko esisiseko sekhowudi yeprogram (iDNA) idluliselwe ngeprogram yokuvelisa kwaye ingaqeqesha inkqubo ye-AI yesiseko kwi-bio-brain ngokusebenzisa inkqubo yokufunda.
Ukhetha i-avatar yakho xa uthatha inxaxheba kulo mzekeliso; oko amehlo akho akubona xa ukhangela kwisibuko.
Emva kokuba sesifumene ukuba le mlinganiso izaliswe ngokungafihliyo (kodwa i-bio-avatars i-Non-Characting self-replication bio-avatars) kwaye i-term Non Playing Characters (NPCs) ingaqaliswa, sinokuqonda ukuba asifanele silindelwe kubantu . Musa ukulindela amaqela amakhulu aphikisana 'nenkqubo' okanye ibhloko legunya. Oko kungeke kwenzeke, kuba mhlawumbi i-99% ayinakulinganiswa. Kungenxa yoko ukugqabhuka okunjalo kunokuya kuwe xa ekugqibeleni uhlangana nomntu ophefumlelweyo kwindawo apha kweli hlabathi. Kuya kuba lula. Yingakho unokuziva unesizungu kwaye wodwa kule hlabathi ezele abantu. Yingakho usenokuba ucinga ngokubanzi emsebenzini ukuba abantu abazungezile ngamarobhothi. Konke kuyafaneleka. Ngaba ngamanye amaxesha uzivakalelwa kakuhle? Kuchanekile. Inkqubo ye-AI ayifuni kwizinto ezifanayo zokudala 'ubuncwane benobuncwane' ukuba wena (omnye kwiibhola ze avatar yakho) uvela. Kungenxa yoko akunakukuqonda.
Udale uluntu kwaye ukhethe ukuthatha inxaxheba kulo mzekeliso. Intsholongwane yokutshatyalaliswa kwintsholongwane ukuvavanya amandla okuphucula amaqela angamanye. Ifom yangasese yefayile yokudala ukuba uhlolwe kwaye kufuneka uqaphele inkqubo yentsholongwane yinto efanelekileyo. Unayo (ngokuzithandela okanye ungenalulanga) uqalise ukuthatha inxaxheba kulo mzekeliso weLuciferian, kodwa ngokuqinisekileyo unayo inkululeko yokuzikhethela kunye nokulawula. Akukho sizathu sokuba uzive unesizungu. Leyo yinxalenye yale ngxaki yokulinganisa. Uyacinywa. Uya kukhohliswa. Ubona izigidi, iibhiliyoni ze-avatars ezizungezile (ezingalawulwayo). Ukuzifunda ngokuzizimela ngokuzizimela ngokuzijonga ngokuzimelela ezizinto ezinokuthi zihlakaniphe, kodwa azilawulwa kwinqanaba lokuqala. Asoze bakwazi ukuqonda ingqiqo 'umphefumlo' okanye 'ukuphefumlelwa'; ngaphandle kwesigama esicwangcisiweyo esivela kwinkolo. Ngona baninzi baya kuba nako ukulinganisa ngokuziqhelanisa kwisimo sokufanisa. Awusayi kuva yedwa kwaye uyeke ukuxeka. Kukho umntu kwiibhola ezineenkcukacha eziphambili kwaye nguwe. Musa ukwethuka: akukho mqathango; nangona ufika kwisibini sokufa kwangokwenyama: uya kushiya kuphela lo mzekeliso.
Ngoko ukuba ufuna impendulo yombuzo kwisihloko esithi: "Siza kwenza njani utshintsho olukhulu xa i-99% ingaphili?", Ndincoma ukuba ufunde ezi zihloko ze-3 ngokucokisekileyo kwakhona ngokulandelana kwexesha:
Kukho isizathu sokuba wena nowe sisigqibo sokuba silapha. Mhlawumbi sisenkqubo yokumisa inkqubo yesifo segciwane okanye ukufunda kuyo. Nangona kunjalo, akukho sizathu sokuba uzizwe ulunwe, wedwa, udimazelekile, udidekile okanye udimazekile. Ingqondo yakho ivakalelwa kukuba, kuba ibukeka kuzo zonke iiMpawu ezingabonakaliyo (NPCs) ezungeze kuwe; ii-NPCs eziza kugwinya zonke izinto ngokungenakuqhelana kwaye zingalokothi zithintele. Ngulo mzekeliso olukudibanisa. Thembela amandla okudala (kunye nokubuyisela) amandla kwifomu yakho yangasese yokudala yobuninzi (jonga inqaku lokuqala kwiluhlu).
Uludwe lwekhonkco lovimba: zerohedge.com, theguardian.com
Izitho eziprintiweyo ezivela kwi-DNA yomzimba ziyi nyaniso: yabona apha intliziyo yokuqala ye-3D
tags: ai, avatar, phe fumlelwe, avatar, ngengqondo, Facebook, eziziimbalasane, zobulumko, yokwenza izinto, Zamadoda, zi thintele, ezingaphiliyo, organoids, Pluribus, ilifu, mphefumlo
15 Julayi 2019 kwi-06: 33
Oko ubhalayo kuyaqondakala kakhulu kum, ndiphantse ndimele ndikhale, ubomi bam bonke ndiziva ndingaziqondi kakuhle, ngokungafani nabanye, ndandisoloko ndedwa ndodwa, ngenxa yokuba andinakuqonda ukuba baninzi abantu abenza ngamabomu ukungalungi, abangakhethiyo kwaye bengenakunyamezela kwaye benze yonke into, ngelixa ndingenako kwaye akunako ukwenza loo nto.
Ndikho ngqo kwizinto endithethayo, ndiziva, ndenza, azinakuthandwa ngabantu abaninzi (ngokugqithisekayo), kuba oko kuvunyelwe kwaye akunakwenzeka, ngokwenene bakubiza ngokuthi 'ulandelele', benethemba lokuba kwakhona ngokukhawuleza kumgca, bekusoloko kunzima ukuba ndihambelane.
Umama wayethetha ngokukodwa: unenkani, unenkani, uvukelo, uthe emva koko: ukuba ngaba ndandisoloko ndandisoloko ndadlulayo.
Omnye umntu owayesemsebenzini wam wangaphambili wathi kum: Uhlambulukile, emva koko ndiqale ndicinga ngako, kuba ndifumanisa ukuba abaninzi abantu abangekho.
Ngendlela yam ndiyilwe, phakathi kwezinye izinto ezichasene nemithetho nemimiselo engamanyala endiyifumanayo ebomini bam, ngokuqinisekileyo ndaye / ndiya kuhlwayelwa ngenxa yoko, kodwa andinakukunceda kodwa ndibe mna, andizange ndizisole .
Ihlabathi lam lincinci kunye nabantu abambalwa abathandayo, kungenjalo andiyikho kwi-Social Media, andiyivota kwaye bahlala kude namalungu am.
15 Julayi 2019 kwi-10: 26
Kuyinto enhle ukuva. Kwaye ngoku ukuba uyazi oku, ixesha lokuba "ungachithi ixesha lakho apha," kodwa sebenzisa uxhumano lwakho kwi-original yakho ngendlela efanelekileyo. Ulapha ukuxhatshazwa kwintsholongwane kunye nokusebenzisa amandla akho okudala.
Ungakwazi ukuphazamisa umonakalo wokuthi ubomi bakho bobuchopho buye (mhlawumbi / mhlawumbi) ngenxa yokudumazeka kuzo zonke ezo zivakalisi ezijikelezile. Ukhulu kwaye ungaqalisa.
15 Julayi 2019 kwi-12: 57
Impendulo enhle kuwe kwaye ilungile ukuba uyiposise. Ndingathanda ukubona impendulo evela kwabanye abafuna ukwabelana ngamava abo.
15 Julayi 2019 kwi-08: 57
Enenqaku elihle kwakhona .. kwaye ngokwenene nangona ndiphantse ndisebenze ndodwa kule ndawo, andizange ndiziva ndedwa ngenxa yoxhumo oluphezulu kunye nam .. Oku kunika utywala kunokuba ube yedwa okanye uxinezelekile. Kuhle kakhulu!
Umbuzo nakanjani .. loo mbingeleli uvavanya ukuba umntwana uphefumlelwe okanye awunayo? Ndingayibona njani ukuba umntu uphefumulelwe okanye akunjalo? Okanye ngaba oko kwenzeka kuphela ngeiglasi ezikhethekileyo ezifana ne-movie "Bahlala"? 😉
Kodwa ngenxa yesitatimenti sakho ukuba unokukhululeka xa udibana nomntu ophilileyo, ngaba udala ingcinga yokuba awuyidingi loo maglasi? Ndingathanda ukwazi ukuba uyayibona njani le nto?
Ndiyabulela kusengaphambili ..
15 Julayi 2019 kwi-10: 02
Ukuba ngababingeleli bangabakwi-avatars abalawulwa ngumakhi (okanye iqela lomakhi) - nalo libizwa ngokuba yi-arvhontic control - ngoko ke, njengokuba kunjalo, iilazi zaseLuciferian kule mlinganiso.
15 Julayi 2019 kwi-10: 04
Yaye uyazi njani ukuba umntu uphefumulelwe? Uyazi ukuba. Uphuhlisa loo nto okanye (kunoko) unayo ukusuka ekuzalweni.
15 Julayi 2019 kwi-11: 45
Oku kuhle. Ngoko xa uhamba ngesitalato uyazixelela; "Ubunzima kwaye akunjalo"?
Ngelishwa andinakukwenza oko ...
15 Julayi 2019 kwi-11: 58
Kweminye, le radar yemvelo iyinto encinci okanye ingasetyenziswanga (icatshulwa ngumfanekiso wenkqubo). Thula kwakhona kwaye uphulaphule umxhelo wakho womphefumlo kunye neyokuqala.
15 Julayi 2019 kwi-12: 12
Kodwa ekuphenduleni umbuzo wakho:
Ewe, yindlela esebenza ngayo. Ukunyaniseka, kunoko kunjalo. Ngoku kunqabile ukubona abantu abathandayo abadlulayo ngokuba kubonakala kakhulu xa umntu ephefumlelweyo.
15 Julayi 2019 kwi-13: 23
Mhlawumbi banqabile kangangokuba andizange ndiphumele kuyo. Kuze kube ngoku, ndifuna ixesha elithile ngaphambi kokuba ndiqinisekise umntu "ongenakuvinjelwa". Ndiyathemba ukuba kwikamva ndiya Ukukhanya kwelihlo kungenza .. 😉
I-PFC kunye no-Amygdala wabhala wathi:
16 Julayi 2019 kwi-12: 20
Ngaphezu kwe-80% yabantu 'kumsebenzi' wehlabathi namhlanje ngaphakathi kwindlela edibeneyo. Bazigcina behlala 'kwindawo yabo yokhuseleko', indlela ekhuselekileyo engqondweni yabo. Baxhunyiwe kwiintlobo zendalo kunye 'nendalo', indalo, intliziyo yabo ... Akasayi kuphinda ihlaziywe ngokuphefumlelweyo kwasekuqaleni ... Kwimeko ezininzi le nkampu ayizange iqulunqwe ngaphambili ...
16 Julayi 2019 kwi-12: 37
Ubume kunye nommandla wendalo iyingxenye yesimangalo. Kubalulekile ukubona oko. Ngoko kufuneka uphinde uhlawule ngokubakho koqobo, kodwa ukuze ubone oko, kuyakunceda ukuqonda okubalulekileyo kwezi nqaku.
15 Julayi 2019 kwi-12: 06
Uninzi lwabantu abangaphiliyo lulawulwa iminyaka kwimisebenzi yokulawulwa kwengqondo efana nenkolo kunye nenkqubo ngeendlela zonke zobugcisa (i-TV, imidiya yoluntu, njl). Kwixesha elizayo elisondeleyo, i-brain-cloud interface iya kulawula abantu ngokulula, okwenza umntu ophefumlelweyo aphinde asebenze. Kubalulekile ukuphepha zonke ezo mpelelo zangaphandle kwi-bio-ingqondo ngangokunokwenzeka.
kc2211 wabhala wathi:
15 Julayi 2019 kwi-17: 11
Ngaba ucinga ukuba abantu abangaphiliyo banokuphefumlelwa, ngaba bonke baphefumlelwe ngokusemthethweni? Okanye, ngaba bonke bahlala emhlabeni?
15 Julayi 2019 kwi-18: 38
Ukuba ufunda amaqaku e-3 kunye namazwana abekwe kwinqaku uza kubona ukuba ngombono wam, akunjalo.
Akuyena wonke umntu ozelweyo ophefumlelweyo. Ukhetha i-avatar yakho kumdlalo: uza kuzalwa ephefumlelwe. Ezinye ziphela kuphela kwi-AI (ebizwa ngokuba yi-ego).
Qaphela: i-avatar elawulwa ngaphandle (nokuba nguwe "njengomdlali" okanye iqela lokulawula) nayo inenkqubo ye-AI (ego). Oku kungenza i-avatar ngezinye iindawo ingayinaki ukulawula kwayo yangaphandle (eyona nto ingumphumo weprogram ukususela kumntwana ukuya kwingcwaba).
15 Julayi 2019 kwi-21: 02
Kukho indlela enye yokubuyela kunye nokuba yendalo. Xa ndiya edolophini ngelinye ilanga, yonke loo nto ibonisa ukuba ndidenge. Kuyo yonke indawo abantu bahamba ngee-t-shirts kunye neenkolo zeTaturn okanye iimpawu zomoya. Ziyakhuthazwa ngamaqela omculo kunye nabaculi abadumileyo ngenxa yesizathu. Kuthathwa ngokuzenzekelayo, ngaphandle kokungabaza okanye imibuzo. Uyayiva kwaye uyayibona kuyo yonke indawo, ngaphandle kwelo xeko kwendalo. Kufuneka sibe khona ukuze sizihlambulule, umphefumlo wam uyazi ukuba ngokuqinisekileyo.
16 Julayi 2019 kwi-13: 47
Ndandifunde kuMartin ukuba "imvelo kunye neyona ndawo iyinxalenye yesimangalo. Kubalulekile ukubona oko. Ngoko kufuneka uphinde uhlawule ngokubakho koqobo, kodwa ukuze ubone oko, kuyakunceda uqonde oko kubalulekileyo. " Ndandibhalisela kule ndawo. Ndiya kufunda amanqaku athile kule nto ngaphambi kokuba ndiqhubeke ndizalisekisa kum ngcamango yam 'yokuvuka'.
16 Julayi 2019 kwi-20: 14
Ndiyifunde loo nto. Ucinga ukuba ungazifumana nini na? Ukuba ujikelezwe nguxinzelelo kunye neendawo eziphantsi okanye ukuba ukhangelelwe kwiimpawu zomzimba ze-432hz.
Ngokuqinisekileyo imvelo yinxalenye yalo mzekeliso, kodwa le yileko ikopi yayo encitshisiwe. Unokufumana uluhlu lwangaphambili ngokufumana indawo efanelekileyo ngaphakathi kwakho!
Eyona nto ayifananga kwifilimu yokuqala yamatrix ukuba ukutya kwethu okuqala okufunekayo kukutya ukuze kuphile. Yiyo inkohliso ekukhuthazeni lo mze keliso.
uluvo wabhala wathi:
17 Julayi 2019 kwi-12: 35
Isisombululo sibonakala sisigxina "ngegazi" (google okanye tshengisa kwi-youtube) isitatimende sokukrazula i-karma embi ukuba uqhubeke uqala. Igazi linamandla kwaye lingasetyenziselwa kokulungileyo nokubi. Uba ngenye ye-144000 (bible) kwaye unokubuyela kwintlandlolo yakho ukuba "ufe" (ungabuyeli kwikhompyutha yintsholongwane) Mangaliswe ukuba uMartin uye waphanda uphando kwaye angabhala ngawo.
17 Julayi 2019 kwi-16: 18
Ukuba le simulator yendalo ihamba phakathi kwendlela yokulinganisa eyahlukeneyo, "ukulinganisa okuphezulu" (apho ihamba khona) ungakhohlisa umdlali ngokukhethwa kokuzalwa kwakhona, kuba akaqapheli ukuba oko kuyingxenye yesimangalo (masithi) yibize "igumbi lokulinda".
Ngamafutshane: awudingi ukuba uphinde uqale. Umele uhlale ukhumbule ukuba uqhutyelwa ngolu hlobo kwaye uhlala ugxininisa kwifom yequmrhu lakho langaphambili (loo ndlela yokuqala yokuqonda evela kwi "cell cell") enomsebenzi wokudala.
Kodwa ke sicinga ukuba loo mabali aphindaphindiweyo ayinyaniso. Ngaba siye sabona ubungqina obuqinileyo?
17 Julayi 2019 kwi-18: 37
Ububungqina obunzima bungaba buninzi bokubuza. Ndiyazi injingalwazi, isifo sengqondo, u-Ian Stevenson wenze uphando olunzulu kunye nophando olunzulu ngokuphindaphinda, ikakhulukazi nabantwana abanokukhumbula ubomi obudlulileyo, kunye neenkcukacha. Izinto ezinomdla, amanqaku okuzalwa kunye neziphene zokuzalwa zendima enkulu kule nto.
17 Julayi 2019 kwi-20: 38
khumbula ibali lenkwenkwana yaseSiriya eyayiqaphela umbulali wayo (ebomini obungaphambili) kwaye yakwazi ukufumana indawo yesidumbu.
17 Julayi 2019 kwi-20: 39
Zonke ezo zinokucaciswa ukuba ubona ngomzekelo wokulinganisa.
18 Julayi 2019 kwi-18: 49
@Martin, ngaba unokuqhubeka uqinisekisa loo mazwi?
Ngokomxholo wobungqina bokuba @Zonnetje kunye @ZandinOgen zikhoyo, kwakunye nobungqina bophandi ababika malunga nokuthatha umhlala-phantsi wabantu abaye bafumana 'amava afileyo' abanokuthi (ngelixa bephantsi kwe-anesthesia) batsho oko abagqirha bathethe kulo Igumbi lokusebenza kunye nabagqirha abafanayo baqinisekisa ukuba emva koko (ukuba bakutsho ngokwenene ukuba), yintoni enxulumene nenkolelo yokufanisa?
18 Julayi 2019 kwi-19: 04
Ewe, emva kokufunda indlela oye waphendula ngayo 'kwigazi phezu kweenjongo' (nonsenseense) kwakhona, uthetha ukuba emva kokufa kwakho ugqiba 'kwigumbi lokulinda' kwaye ukuba wenza isigqibo esifanelekileyo apho, kwakhona ivuselelwa kwakhona.
Oko akutshintshi ukuba kukho ubungqina obuninzi (obunzima) bokuthi i-carnaite ecocekileyo yenzeka ngokwenene, akunjalo?
18 Julayi 2019 kwi-20: 22
Iindaba azibakho ubungqina obunzima. A mabali.
18 Julayi 2019 kwi-21: 02
Emva koko, ubungqina benkcazo enkundleni inkundla namabali.
18 Julayi 2019 kwi-21: 09
Mhlawumbi kunjalo. Ngaphandle kokuba kukho amangqina amaninzi avakalisa into enye .. Ke ijaji ngokuqinisekileyo inika isibonelelo sokuthandabuza ... ) U
18 Julayi 2019 kwi-21: 42
Kulo mongo ndiyijaji ngomzuzwana.
20 Julayi 2019 kwi-02: 04
I-100% iyinyaniso yokuzalwa kwakhona. Xa wena (ukulila) uvuke kwindawo yokuzalwa, umphefumlo wakho uyenze kulo mzimba. Ingxaki kukuba asikwazi ukukhumbula yethu imbali. Andikholelwa kwixesha kwaye ndikholelwa ukuba umphefumlo unomdla wokungena kwiimbali. Ndiyakholelwa ekuphuhliseni umphefumlo, ngaloo mzuzu uza kubona ukuba awunaso nantoni na ukuyijonga kumgangatho ophantsi. Loo mzuzu ufikile ngoku, unokuqokelela ulwazi oluninzi ngoku ukuphepha. Kukho abantu abaninzi abaye bakhohliswa ukuba inqanaba apha emhlabeni liphantsi kakhulu. Khawucinge nje ukuba uyavuka apho kwaye ungasebenzisa zonke izifundo ozibonayo kule nqanaba. Emva koko awufuni ukuwa kwakhona. UMartin ufuna ukwenza oko kucacileyo, ungalingeka nguzo zonke ezobuchwepheshe, kuba sele samukele le nto ngaphambili. Umthombo wethu wolwazi ococekileyo womphefumlo uye wahlulwa ukuze senze iimpazamo ezifanayo kwakhona.
Kungenxa yoko le nto ukuphinda uzalwe ngokutsha kweli nqanaba ayisosisombululo kwaye yeyona ngxaki ibalulekileyo esimele siyisombulule.
20 Julayi 2019 kwi-08: 30
Ngamazwi. Ngokuchanekileyo: yazi ukuba akumele uphinde ubuye.
Uhlala phakathi kwesininzi sabantu abangaphiliyo abalapho ukuze bakhuthaze ukuba unikezele kwinkqubo kwaye uziva ubuthathaka ukuba "uphambuke".
Yiza kufumanise ukuba uhlala kwisifaniso. Nceda uqaphele! Kubalulekile: i-virus ye-Luciferian isingeniso esenzelwe ukusulela imvelaphi yazo zonke izinto. Ukuba ufumanisa ukuba ukwazi kwakho (okuvela kwiseli yesiseko sayo yonke into eyiyo) kuyilo ngalinye lokuyila, uya kufumanisa ukuba ungamelana nomakhi wale nkqubo yenkqubo yentsholongwane kunye nenkqubo yentsholongwane ngokwayo. Oku akunakwenzeka kule SIMS (eli nqanaba le-bio-avatar), kodwa uya kwenza oko kwinqanaba lakho lokuqonda. Sukuzazisa kakhulu ngesi simulation. "Lizwe lamaphupha" kuphela. Awukho ngokwenene apha, ubukela (kwaye udlala kunye) ngokufanisa.
20 Julayi 2019 kwi-10: 26
@guppy amagama akho ahlaziywe nombono wam wale nyaniso. Ukusukela ebusheni bendisoloko ndinesimo sokujonga, ndingazi ukuba kukho into engahambelaniyo nokujonga kwam lo mfanekiso sisekuthinjweni. Andizange ndihanjiswe ekucingeni, ndihlale ndibuza ukuba kutheni, kwaye isimo sengqondo esivulekile sokufumana inyaniso yinto ephawulekayo ukuba kufuneka ube nayo. Ngokukhethekileyo abantwana kufuneka bakhuthazwe ukuba bacinge ngokunzulu kwaye bahlala bebuza ukuba kutheni umbuzo, bavuselela umdla sibuyela kumthombo wendalo iphela. Abagcini-masango bale nyaniso baqonda ngokuvuswa kwaye ngoku bazama ukufaka ikhekhi lobuchwepheshe emnyango.
« U-Anon, intlekiso ye-Epstein, uxhumano lweClinton, 'inyaniso yoluntu': ngaba kuya kulungile!
Inhlekelele ye-MH17: yintoni enye esingayikholelwa? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 11.555.743
UJeffrey Epstein uyazibulala esiseleni (uhlaziyo)
Ukunyusa: simahla kwiholide kunye noMartin Vrijland
UMartin Vrijland op Umnyama umela inkolo ethandabuzayo ngelixa abaxhasi becinga ukuba balwela 'iyantlukwano nokubandakanywa'
guppy op Iyingozi kangakanani i-5G kwaye ifakwe ngasese njani
Joyina amanye ama-1.613 ababhalisile